internet sharing ​ဘယ်​လို ​ခွဲ​သုံး​မ​လဲ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Yazar February 5, 2010 at 1:04 PM
​ညီ​နေ​မင်း​ရေ . .
​ကျွန်​တော်​တို့ ​အင်​တာ​နက်​ဆိုင်​မှာ . .wireless ​သုံး​လို့​ရ​တော့ . .​ဘေး​နား​က ​အိမ်​က ​ကောင်​လေး​တွေ​ဆို​ရင် . .​ဆိုင်​မှာ​လာ​မ​သုံး​ပဲ​နဲ့ . .​အိမ်​မှာ​ပဲ​သုံး​တယ် . .​ဘယ်​လို​လဲ​ဆို​တော့ . . . ​သုံး​နာ​ရီ​စာ ​ပိုက်​ဆံ​လာ​ပေး​ပြီး​တော့ . .​အိမ်​က​နေ​ပဲ ၃​နာ​ရီ ​သုံး​တယ် . .
​အဲ့​ဒီ​လို​မျိုး ​တစ်​လုံး​စာ​ပဲ​ပေး​ပြီး . .​နှစ်​လုံး​သုံး​လုံး ​သုံး​နေ​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဘယ်​လို​ကာ​ကွယ်​လို့​ရ​ပါ​သ​လဲ . .​သိ​ချင်​ပါ​တယ် . .
John Smith October 4, 2010 at 8:28 PM
MAC address ​ကို Router ​မှာ​ထည့်​ပြီး ​စမ်း​ကြည့်​စေ​ချင်​ပါ​တယ်
mother's heir August 2, 2011 at 10:03 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ခင်​ဗျ ​ကျွန်​တော်​က ​ထိုင်း​မှာ ​အ​လုပ်​လုပ်​ပါ​တယ် ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဂိမ်း​ဆိုင်​မှာ ​လုပ်​ရ​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကျွန်​တော် ​ချက်​တင်​လေး​လောက်​နဲ့​ပဲ​လမ်း​ဆုံး​နေ​ပါ​တယ် ​တက်​ချင်​တာ​တော့် ​အ​များ​ကြီး​ပါ​ပဲ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး ​သိ​ချင်​တာ ​တစ်​ခု​က ​အင်​တာ​နက်​ဆိုင်​မှာ​လုပ်​ပြီး ​ကျွန်​တော်​အင်​တာ​နက်​ကို ​အ​လ​ကား​မ​သုံး​ရ​တာ ​တစ်​ခု​ပါ ​အင်​တာ​နက်​ကို ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့​လက်​တော့်​နဲ့ wireless ​ချိတ်​လို့​ရ​နိုင်​မ​လား
​ဘာ​ဆို​ဘာ​မှ ​မ​သိ​တဲ့ ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက် sainayzawhtwe22@gmail.com
ZAYAR LWIN October 21, 2012 at 6:35 AM
Yes,u can use.press WiFi icon to turn on .press net connection icon .u will see wearless names near by it place.chose one.give password
zawwinkhaing December 14, 2011 at 9:36 AM
summer December 23, 2011 at 10:55 AM
thanks so much for knowledge brother.Be success
​အီး​တီ September 3, 2012 at 8:28 PM
​စမ်း​သပ်​လိုက်​ဦး​မယ် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျေး​ဇူး​ပဲ​ဗျို့
Aung Pyae February 7, 2013 at 11:32 AM
kingof tarus May 16, 2013 at 12:12 PM
​ကို​ညီ​ရေ laptop ​တစ်​လုံး​မှာ printer ​တပ်​ထား​ပြီး ​အဲ့​ဒီ printer ​ကို ​ကျွန်​တော်share​ပေး​ပြီး ​ကျန်​တဲ့ laptop ​တွေ​က ​အ​ထက်​က​နည်း​အ​တိုင်း print ​ထုတ်​လို့ ​ရ​ပါ​သ​လား။ ​ဘာ​တွေ​လို​အပ်​မ​လဲ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​ကျေး​ဇူး​တင်​လျက်
zawwinkhaing December 30, 2013 at 2:13 PM
nyi lin February 13, 2016 at 6:01 AM
ကိုညီနေမင်းရေ net sharing post ကိုမရှင်းလို့ပါ computer name တွေ work group တွေသတ်မှတ်စရာမလိုတော့ဘူးလား ဗျ gate way တွေကော်။ ပထမလုံးက 192.168.0.1 ဆို ဒုတိယအလုံးက ip address က 192.168.0.xxx လုပ်ပေးရဘူးလား